Umbukiso wezohwebo waseBombay kanye nombiko omfushane wemakethe yaseNdiya
Sabona ukukhula kweChina. Ngokunjalo neNdiya nayo inethuba lokuba yizwe lezimboni elinamandla. Intengo ikotini nentengo yemanuwali ishibhile eNdiya, ngokwejwayelekile badinga ne-polyester eshibhile yaseChinese, i-viscose, i-elastane njll. Ngakho-ke ukuhlola imakethe yaseNdiya nokufuna amathuba nakho kuyipulani lethu leminyaka eyishumi ezayo.
Isinyathelo esiya kwelinye izwe eMyanmar
IYangon, inhloko-dolobha yaseMyanmar, inamaphakethe angaphezu kwezigidi ezi-5 kuleli dolobha futhi inechweba elixakeke kakhulu eMyanmar. Ngaphandle kokungabaza, kuyinkanyezi ekhuphukayo yomakhi wezingubo nefektri. Maphakathi no-2019, Inkampani yethu iqala ukutshala imali yaseYangon ifektri futhi ihlanganise izinsiza phakathi kweChina neMyanmar, okusenza sithembele ngokwengeziwe ukunika amakhasimende ethu inani lokuncintisana.
Umbukiso wemfashini weMilingo: unyaka obalulekile emakethe yaseNyakatho Melika.
U-2012 ungunyaka obalulekile wefekthri yethu. Ngaphambi kwalowo mbukiso, amakhasimende ethu agxila e-Australia naseYurophu. Ngemuva kwalowo mbukiso, sithola ababambisene abathembekile futhi sasungula izinkampani zesikhathi eside.
Ukuhlola ku-E-commerce: Isitolo se-AliExpress nendlela entsha yokubhekana nezindwangu zezitoko.
Ngokukhula okukhulayo kwe-e-commerce, inkampani yethu ifuna indlela engcono yezindwangu zesitoko. Ithimba lethu eliqala ukuklama nokwenza izambatho ngezindwangu zesitoko, lizithengise noma lizithengise noma li-e-commerce platform ngaphakathi nangaphandle kwezwe. Uma uyithanda, hlola